Nahoana no mampitombo ny androm-piainana ny fampihavanana tranon-jaza? Mehr News Agency Iran sy ny vaovao manerantany - adiet
Nahoana no mampitombo ny androm-piainana ny fampihavanana tranon-jaza? Mehr News Agency Iran sy ny vaovao manerantany
اسفند 29, 1400 از adiet
Araka ny filazan’ny mpanao gazety Mehr, ny toriteny nataon’i Fadakiyeh dia ny anaran’ny lahatenin’i Hazrat Fatemeh (PBUH) tao amin’ny Moske Mpaminany, izay natao ho fanoherana ny fandrobana an’i Fadak. Taorian’ny zava-nitranga taorian’ny nahafatesan’ny Mpaminany (SAW), ny kalifa voalohany dia naka an-keriny ny tanin’i Fadak izay nomen’ny Mpaminany (SAW) an’i Hazrat Fatima (SAW) ho fanohanana ny kalifa tamin’ny alalan’ny filazana ny fitantarana ho an’ny Mpaminany (SAW). fa tsy namela lova ny mpaminany. Nankany amin’ny Moskean’ny Mpaminany i Fatemeh (PBUH) rehefa tsy nahitam-bokany ny fitoriana nataony ary nanao toriteny izay nantsoina hoe Toriteny Fadkiyeh. Tamin’ity toriteny ity dia nanazava ny fananany an’i Fadak izy. Niaro ny zon’ny Imam Ali (as) momba ny kalifa ihany koa izy ary nibedy ny silamo noho ny fahanginany manoloana ny fampahoriana ny Ahl al-Bayt (as).
Ny toriteny nataon’i Fadakiyeh dia ahitana fitambarana fampianarana madio eo amin’ny sehatry ny teolojia, fitsanganana amin’ny maty, faminaniana ary fitsanganan’ny Mpaminany silamo (PBUH), ny halehiben’ny CORAN, ny filozofian’ny fitsipika sy ny fitandremana.
Ny eo anoloanao dia ny ampahany faharoa amby telopolo amin’ny lahateny Ayatollah Mesbah Yazdi nodimandry Momba ny filazalazana ny toritenin’i Hazrat Fatemeh Zahra, fiadanana ho azy, dia hoy izy ireo:
را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ برَّ الْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالِدَيْنِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدِقَایَةً مِنَ السُّّخْطِ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْسَأَةً فِي الْعُمُرِ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مَلْمَ;
Ny fandikana ara-bakiteny an’io andininy io avy amin’ny toriteny nataon’i Sedigheh Kobra Fatemeh Zahra, ny fiadanana ho azy, dia ny hoe “Andriamanitra Tsitoha dia nanao ny tsara ho an’ny ray aman-dreny mba hisorohana ny fahatezerany ary tsy maintsy mifandray amin’ny havana mba hanalava ny androm-piainanao sy hampitomboanao. ny nomerao.” Ny foto-kevitr’ireo fehezanteny roa ireo dia ny hatsaram-panahy amin’ny ray aman-dreny sy ny famindram-po. Ireo asa roa ireo dia tena mifanakaiky sy mifandray.
Misaotra ray aman-dreny misaotra an’Andriamanitra
Fantatsika rehetra fa tena zava-dehibe amin’ny finoana silamo ireo olana roa ireo. Amin’ny toe-javatra maro ao amin’ny CORAN, Andriamanitra Tsitoha dia mandidy ny fanompoam-pivavahana Aminy aloha ary avy eo dia manome hatsaram-panahy ho an’ny ray aman-dreny; را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضي ربك ألا تعبوا لالا ُياه را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَبِالْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالِدَيْنِ ِِحْسَانًا. Toa rehefa avy nanao ny adidy amin’ny fanompoana an’Andriamanitra Tsitoha, dia tsy misy zavatra tsy maintsy atao mihoatra noho ny fikarakarana ny ray aman-dreniny. Fandikana tena hafahafa, maneho hevitra ary mampatahotra izany.
Ao amin’ny andininy mitovy amin’izany dia hoy izy: “Misaora ahy sy ny ray aman-dreninao.” Tsy miteny izy hoe: Misaotra ahy ary misaotra ny ray aman-dreninao; Fa kosa, mamadika an’i “Lee” sy “Lavaldik” izy ary maneho izany amin’ny zavatra iray. Avy amin’ireo andininy ireo sy ireo fitantarana an-jatony no miharihary ny maha-zava-dehibe an’io asa io amin’ny resaka shari’a masin’ny finoana silamo.
Miaraka amin’ny fandikana mitovy amin’izany, mazava ho azy, ny ambany kely dia milaza momba ny havana: Manana fitia an’Andriamanitra; Ilay Andriamanitra iray ihany no ianiananao eo amin’ny fiarahanao, ary rehefa mangataka zavatra amin’olona ianao dia miteny hoe: Andriamanitra ianao! Ataovy izany, na ampiasao ny anarany mba hanaporofoana zavatra; “Andriamanitra, Izay masina indrindra aminareo, dia tsy maintsy mitandrina mba hahatanteraka ny zony.” Dia hoy izy: را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَأأرْحَامَ; Izany hoe tandremo ny zon’Andriamanitra ary avy eo ny zon’ny havana. Tena manan-danja tokoa io fampitahana io.
Zo tsy misy fepetra
Ny teboka izay misarika ny sain’ny olombelona amin’ireo fitantarana am-polony maro dia ny hoe tsy tokony ho mpino na silamo akory no fepetran’ny fiantrana ny ray aman-dreny. Raha tsy mpino koa ny ray aman-dreny, dia manan-jo hankatò sy hanao hatsaram-panahy amin’ny zanany; Mazava ho azy fa raha silamo izy ireo dia hanana zo roa, ary raha Shiita izy dia hanana zo fahatelo, ary raha manao asa soa ho an’ny zanany izy dia hanana zo hafa; Saingy ny maha-ray aman-dreny azy ireo sy ny nahaterahan’ilay zaza dia manan-jo amin’ny zaza ho silamo na tsy mpino, marina na ratsy fanahy, tsara fanahy na maloto fitondran-tena, dia tsy misy fiantraikany amin’izany zo izany. Tsy tokony hankatoavina fotsiny amin’ny fahotan’Andriamanitra izy ireo.
Ambaratonga sy fitsipiky ny famindram-po
Raha ny momba ny fampihavanana tranon-jaza dia ifanarahana fa voarara ny fanalana zaza. Ny fanapahana dia midika hoe manapaka ny havany toy ny tsy havany ny olona iray; Tsy misy fahitana, tsy misy fanajana, tsy misy fanomezana, tsy misy fifandraisana hafa.
Tena voarara izany ary anisan’ny fahotana lehibe. Tena ilaina anefa ny fampihavanana ny tranon-jaza ka tsy ilaina ny amputation; Satria tsy afa-misaraka izy roa. Ny azo antoka dia voarara ny fanalana zaza. Ahoana anefa no ahafantaranao ny momba ny amputation? Ho setrin’izany, dia saika ny manam-pahaizana rehetra no nilaza fa fanao izany.
Tsy mitovy ny fotoana sy ny toerana ary ny halehiben’ny mpihavana. Ny fifandraisana amin’ny olona akaiky dia ilaina, ary ny fifandraisana amin’ny lavitra dia ilaina, ary ny any amin’ny tanàna na firenena hafa dia manana famindram-po hafa. Indraindray dia ampy ny antso an-telefaona. Na ahoana na ahoana, dia tokony ho fomba fanao mahazatra ny milaza fa tsy nanapaka ny fifandraisany tamin’ny havany izy.
Heverina ho anisan’ny fahotana lehibe indrindra ny fanapahana ary tsindriana mihitsy aza fa raha tapahan’ny havanao ianao dia tsy tapahinao. Hoy ny Imam Sajjad (as): Andriamanitra dia tia dingana roa; Ny dingana atao amin’ny lalan’ny jiady sy ny dingana atao amin’ny fametrahana fifandraisana amin’ny havana izay nanapaka ny fifamatorana. 5
Inona no tsiambaratelon’izany fanamafisana rehetra izany? Ny azo ambara fohifohy amin’io fotoana io dia ny hoe voalohany indrindra, ny olombelona dia manana fihetseham-po voajanahary sy nomen’Andriamanitra momba ny ray aman-dreniny, indrindra fa ny reniny. Na iza na iza dia afaka mahatsapa izany fihetseham-po izany; Noho izany dia tsy ilaina ny miresaka betsaka. Ny antony voajanahary amin’izany koa dia mazava be; Ny ray aman-dreny no anton’ny fisian’ny olombelona. Raha tsy mitaiza ny foetus ao an-kibo mandritra ny sivy volana ny reny, raha tsy mampinono na mitaiza, raha tsy miasa ny rainy, aiza no hiveloman’ilay zaza? Manan-jo hiaina amin’ilay zaza izy ireo. Ankoatra ny firaiketam-pony, dia nampifandraisin’Andriamanitra taminy koa ny fon’ilay zaza; Tiany àry izy ireo.
Indrisy anefa fa teo ambanin’ny fitaoman’ny kolontsaina tsy mino an’Andriamanitra, ny tanora sasany izay voataonan’ny eritreri-dratsy dia milaza hoe: “Te ho sambatra ny ray aman-dreny, ka tonga isika. “Inona no zon’izy ireo manodidina antsika?” Ireo olona ireo dia tsy miraharaha ny lafin-javatra tokony horaisin’ny fiainantsika amin’ny ray aman-drenintsika. Niasa ho antsika tamin’ny fomba tsy mbola vita sy tsy vitany mihitsy izy ireo.
Hoy ny Imam Zayn al-‘Abidin (saw) ao amin’ny bokiny momba ny zo: Nomelohany anao tamin’ny ranon’ny ainy izay tsy misy manao na iza na iza tahaka izao, fa nandany ny fampiononana andro aman’alina tamin’ny fomba izay tsy nisy te handany ny fampiononana azy toy izany. “Vonona ny hijanona ho noana mandra-pahavoky sy mangetaheta anareo mba hahavoky anareo”.
Raha misy olona tsy miraharaha ny olona toy izany, voalohany dia sarotra ny miantso azy ho olombelona, ​​ary faharoa, ny olona toy izany ve dia manome lanja ny zon’ny hafa? Lasa tsy mivadika amin’ny vadiny na ny namany ve ny olona toy izany? Tsy mankasitraka an’Andriamanitra ny olona toy izany. Satria hitan’ny masony ny zon’ny reny ka manao izay tsy marina; Rehefa tsy mahita an’Andriamanitra izy dia manao an-tsirambina amin’ny fomba voalohany.
Koa anisan’ny tsara indrindra mety hitarika ny olona ho amin’Andriamanitra sy hamoha ny antony manosika ny toe-panahy araka an’Andriamanitra sy ny fahamarinana ary ny fankasitrahana ao amin’ny olombelona ny fitandremana ny fihetseham-pon’ny ray aman-dreny sy ny zo sy ny adidy tokony ho azy amin’ny olombelona.
Andriamanitra Tsitoha dia manonona ny fisaorana ny ray aman-dreny miaraka amin’ny fisaorana Azy manokana; Toa karazana siramamy ireo roa ireo. Raha lasa ray aman-dreny marina ny olona iray, dia afaka mitandrina ny zon’Andriamanitra; Satria rehefa mandinika izay nataon’ny ray aman-dreniny taminy ny olona iray, dia mihamafy tsikelikely ao aminy ny fanahin’ny fankasitrahana sy ny fankasitrahana, ary avy eo dia mieritreritra ny hisaotra an’Andriamanitra izy. Fa raha tsy niraharaha ny zon’ny ray aman-dreniny izy ka nilaza hoe: tsy te hanao an’ireo! Eo anatrehan’Andriamanitra dia hoy izy: Tsy te hamorona! Koa ny fisaorana ny ray aman-drenintsika sy ny fitandremana ny zon’Andriamanitra ananany amintsika no fomba tsara indrindra hanompoantsika an’Andriamanitra sy hivoatra.
Noho izany, ny fomba tsara indrindra hamonjena ny mpanota dia ny manomboka eto; Izany hoe manompo ny ray aman-dreniny. Tonga ny mpanompon’ny Mpaminany Masina (saw) nanao hoe: Ry irak’Andriamanitra ô! Efa nataoko avokoa izay ratsy rehetra lazainao; Misy lalana hivoahana amiko ve? Hoy ny Imam: Manana ray aman-dreny ve ianao? Hoy izy: Manan-dray aho. Hoy ny Imam: Mandehana manompo ny rainao. Rehefa lasa izy dia hoy ny Imam: Enga anie mba ho velona ny reniny.
Ny tsiambaratelon’ny zavatra rehetra nodidiana momba ny famindram-po dia ny fitahiana omen’Andriamanitra Tsitoha ho an’ny olombelona amin’ny alalan’ny havany dia tena sarobidy ka ny sasany amin’ireo fanompoana ireo dia vonona hovidin’ny olona amin’ny vidiny lafo. Mazava ho azy fa rehefa misy olana amin’ny fianakaviana iray, ohatra, dia mila mandeha any amin’ny hopitaly izy amin’ny misasak’alina, manampy azy ny fianakaviany ary tsy manam-bola.
Mazava ho azy fa misy maningana io fitsipika io; Fa ny olona tsotra sy salama voajanahary no resahina. Andriamanitra dia nampifandray ny olombelona tamin’ny firaiketam-po (izay radius mitovy amin’ny ray sy ny zanaka ary ny reny sy ny zanaka). Raha misy olona mitondra ny havany toy ny olon-tsy fantatra ka tsy mifandray amin’izy ireo, fara faharatsiny, ho kivy sy ho tapaka izy ireo, ary fara faharatsiny, tsy hahazo ireo fitahiana ireo ny antoko.
Izany hoe sakanan’izy ireo ny varavaran’ny famindram-po izay nomen’Andriamanitra Tsitoha ho azy ireo. Ny olona iray izay manakatona ny tokom-pamindrampo toy izany izay tena mahasoa azy ary manapaka izany fifandraisana voajanahary, nomen’Andriamanitra ary madio izany, dia tsy hiorim-paka intsony ny fihetseham-pony amin’ny hafa, ary ny fisakaizana ataony dia ara-dalàna sy hahazoana tombontsoa mandalo. Izany no antony, aorian’ny ray aman-dreny, dia anjaran’ireo izay manana fifandraisana ara-boajanahary kokoa amin’ny lehilahy.
Noharian’Andriamanitra ny olombelona mba hahafantatra Azy, hahatakatra ny fahasoavany sy ny fitahiany, ary hanatona akaiky an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana. Raha misy olona manohitra an’io fomba io ka manidy ny lalana nosokafan’Andriamanitra ho fankasitrahana, dia mazava ho azy fa tsy faly aminy Andriamanitra. Koa ny hatsaram-panahy amin’ny ray aman-dreny dia fahamarinana miaro ny olona amin’ny hamafin’Andriamanitra (را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَبِرَّ الْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالِدَيْنِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدِقَایَةً مِنَ السُّخْطِ).
Indrisy anefa fa eo amin’ny kolontsaintsika amin’izao fotoana izao dia mihamalemy ireo soatoavina ireo ary indraindray hadino miaraka amin’ny nenina an’arivony. Na ny ankizy aza dia mampijaly ny ray aman-dreniny. Tsy maintsy miverina amin’ny kolontsaintsika Islamika isika ary hamelona ireo soatoavina ireo.
Manakaiky an’Andriamanitra, mason’ny soatoavina Islamika
Misy teboka siantifika sy filozofika eto ka tokony hosaintsainina. Rehefa miresaka momba ny fahendren’ny lalàn’Andriamanitra i Hazrat Zahra, dia maneho ny tombontsoan’izao tontolo izao izy ireo. Milaza, ohatra, izy ireo momba ny fanalan-jaza: Ny fanalan-jaza dia manalava ny androm-piainana ary mampitombo ny isan’ny fianakavianao. Ankehitriny ny fanontaniana dia hoe inona no criterion ny soatoavina islamika? Moa ve ny fepetran’ny soatoavina ao amin’ny Islamo tombontsoan’izao tontolo izao?
Noforonina mba hanatona bebe kokoa an’Andriamanitra isika tany am-boalohany, ary izany dia toerana iray izay tsy ho tratra raha tsy amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe: را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, 8 dia noho isika mivavaka no ambony noho ny anjely. Koa ny fitsipiky ny soatoavina dia fahamarinana izay mampanakaiky ny olona amin’Andriamanitra. Misy karazany roa anefa ny ataontsika: ny karazany iray dia mifandray mivantana amin’ny fanatonana an’Andriamanitra, toy ny mivavaka. Izany hoe natao ho fahatsiarovana an’Andriamanitra sy ny fahatahorana an’Andriamanitra ary ny fitiavana an’Andriamanitra no anton’izany fihetsika izany. Miharihary fa ny hasarobidin’ireo fihetsika ireo dia mitovy amin’ny vokany eo amin’ny fanatonana an’Andriamanitra.
Fa ny asa sasany, toy ny fahalalahan-tanana, ny hatsaram-panahy ary ny famindram-po, dia manana karazany roa; Voalohany, manana soatoavina ara-moraly izy ireo; Izany hoe manomana ny olona hifandray amin’Andriamanitra izy ireo. Ny fadiranovana dia gadra mamehy ny tanany sy ny tongotry ny olona ka manakana azy tsy hankany amin’Andriamanitra.
Hoy ny CORAN: را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ; Ny fanakona-masoandro, ny fifehezana, ny fitiavam-bola ary ny fitiavan-tena dia sakana manakana ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Ny fandravana ireo sakana ireo dia afaka manokatra ny lalana hifandraisana amin’Andriamanitra sy hanatonana an’Andriamanitra. Ity dia karazana sanda izay manala ny sakana na manamafy ny contexte fotsiny. Faharoa, ireo asa manatanjaka ireo, na dia tsy mifandray mivantana amin’Andriamanitra aza, dia mety ho fomba mivantana hanatona an’Andriamanitra. Ny fomba dia ny mandinika ny zava-misy fa tian’Andriamanitra ireo asa ireo ary ny filazana mifanaraka amin’izany: “Andriamanitra ô! “Satria tia azy ianao dia manao izany aho.”
Ireo fihetsika ireo dia manana soatoavina ara-môraly irina; Izany hoe, izy ireo no mahatonga ny olona ho tonga lafatra. Voalaza fa Andriamanitra tsy mitondra an’i Hatem Ta’i any amin’ny helo noho ny fanomezany, izany hoe na dia tsy entina any amin’ny paradisa eo akaikin’ny mpaminany aza izy, dia manampy amin’ny fampihenana ny fijaliany sy hahatonga azy ho vonona kokoa hanatona an’Andriamanitra ny fihetsiny. . Fa raha mino sy manao ireo zavatra ireo mba hankato an’Andriamanitra ny olona, ​​dia ireo asa ireo ihany no lasa soratra fanompoam-pivavahana.
Noho izany, raha manao soa amin’ny ray aman-drenintsika sy ny famindram-po noho ny fihetseham-po isika, dia asa tena tsara izany ary manomana antsika ho amin’ny soatoavina ambony sy hanatratra ny tanjon’ny famoronana antsika (fanakaikezana an’Andriamanitra); Tsy mpivavaka mahaleo tena anefa ny tenany. Fa raha manao toy izany koa isika amin’ny fikasana hankatò an’Andriamanitra, dia lasa toy ny vavaka, fanompoam-pivavahana mifandray mivantana amin’Andriamanitra. Tokony handray izany ho toy ny amboara isika ary hiezaka hivavaka amin’ny asa soa; Izany hoe: Andriamanitra ô! Ataoko izany satria tianao.
نظامی اوکراین تحمل نظارت گروه داده ها آمریکا – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان
ایران در داخل 12 ماه 1400 – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان